Europe, izwe elihle ubukhazikhazi futhi inganekwane ngokungangabazeki okuya kuyo ngoba zonke zokuhamba enthusiast laphaya. Nge angenamkhawulo sibambe ongezansi Awakening izindawo ukuvakashelwa, IYurophu eyaziwa omunye amahle phesheya cwaningo Izikhumulo kubafundi International njengoba une-bounty naletingabaleki emabhishi, iziqhingi, izigodlo, izinqaba, futhi izikhumbuzo zomlando.
Salzburg itholakala emngceleni Germany, ezweni lase-Austria, futhi ukugonwa ngu echichima Eastern Alps ukuthi ngempela kwamehlo amehlo. Lokhu emangalisayo futhi Lesser Akwaziwa Beautiful Izikhumulo muzi lapho kwazalelwa Mozart, i-owayedume umculo umqambi, kabani
Yayiyini kanye umuzi wawushiywe yisikhathi, IConstanta njengamanje ingeyesithathu ngobukhulu eRomania idolobha kanye nezinye izindawo eziNcane ezaziwa nge-Europe, netheku lolwandle olwalumemeza olusogwini olusentshonalanga yoLwandle Olumnyama.
Constanta iyikhaya aqinisekiswe eminingi ezidonsela izivakashi ngibuyela okweshumi ekhulwini, kuhlanganise Ovid Square, lapho isithombe sethusi umdwebi engumRoma u-Ovid imele, kanye ububusi Constanta Casino, okuyinto izici nesimo sesakhiwo esikhulu Art Noveau. Constanta ngokufanayo has cishe seashores kakhulu ajabulisayo, lapho kuthanda uthole ithuba ukuthamela ilanga futhi kuhlukaniswe kuze. Uma kwenzeka wena i entsha isimo, bangu uhambo lwezinsuku eziningi kusukela Constanta, okuyinto zihlanganisa ngokuvakashela ezimbili UNESCO Sites Heritage okungukuthi iDanube futhi Tulcea kanye eziphumulele ngasekupheleni ngesikhathi famous beach resort, Mangalia.
Afihliwe ngaphansi amathunzi kuyoyonke imiphakathi esiphawulekayo ngaphezulu Belgian ezisemadolobheni efana Antwerp kanye Brussels, YaseGhent kuyinto Igugu elifihlekile eBelgium. Nge amadolobha ezithakazelisayo futhi disorder kude kancane, YaseGhent kuncane ngokwanele ukuze uzizwe ukhululekile futhi ngokwanele elikhulu Spice up isipiliyoni sakho. Uma ziyazithanda iminyuziyamu kuhle, Amabha nemfashini, futhi i-canal ohlangothini ukubukwa, nakanjani ufuna ukwengeza yaseGhent uvakashe yakho uhambo. Ingxenye izindawo ayifanele indiva kuhlanganisa Gravensteen, mansion wangekhulu leshumi nge yeNayile nazo ukubukwa okumangalisayo, iBelfry yaseGhent, kanye St Baro Cathedral.
Cabanga ngokuvakashela Helsinki ngesikhathi esiphakade yayo izinsuku ehlobo zokuthuthukisa isikhathi sakho kukhona noma wagqoka gutsy yakho amabhuzu ulwe limbozwe ebusika kusihlwa. Noma kunjalo, kukhona ezifana amanani amakhulu izindawo ongazibona, ngeke zithole ithuba ngokuphelele wembule yonke imfihlo liyabamba!
Gothenburg, elise Sweden, iyikhaya Liseberg Funa epaki, okukodwa kwe ezikhangayo phezulu isizwe siqala engomunye wabayishumi Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful. Kuphinde futhi kube idolobha lesibili ngobukhulu kuleli zwe okuyinto nangale ezihlekisayo ngenxa sokufaka yayo kokubili ezweni nasolwandle futhi etshiyeneyo yayo ngemiqondo efana 'Fika " (a sencwadzi ejabulela sekhofi) futhi Feskekorka (fish isonto) Zama ukuvakashela leli dolobha ngo-August okufakaza emangalisayo music festival zabo eyaziwa ngokuthi Way Out West. Akwenzeki uvakashele phakathi nalesi sikhathi? Idolobha ngeke nokho zizenze kuyinjabulo zonke izinzwa zakho ne sceneries amahle,
Ukwehlukaniswa eCroatia yizindawo ezinhle ezingaphansi kwezindawo ezinhle zeholide uma usendleleni yokuzingela okwenzekayo ugu idolobha ngokuxuba nge obandayo Mediterranean vibes. Cuisine lwaseDalmatia lapha kuhambisana kwasolwandle fresh ngeke ukumpotopotoza nisangulukile bese nawe ngamadolo wakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)